Yan Aung: တစ်ထောင့်တစ်ညချစ်သူများအကြောင်း... (၁)
တကယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း မမဇာတ်လမ်းတွေ တော်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်ဗျ. မှတ်မှတ်ရရ ထားခဲ့သမျှ ရည်းစားတွေကို အချိုးချလိုက်ရင် မမတွေက ၈၅ % လောက်၊ ရွယ်တူတွေက ၅ % လောက်နဲ့ ညီမလေးတွေက ၁၀ % လောက်ပါခဲ့တယ်. ဘယ်လိုအချိုးချလဲ ဟုတ်လား… မမေးပါနဲ့ဗျာ. စကားပြောရတာ အမျှင်ပြတ်တယ်….
အင်…. အဟတ်ဟတ်… ဟီး… မပြောဘဲလည်း မနေနိုင်ဘူး…
(၅) တန်းနှစ်ကလေ ကျွန်တော်စစ်တွေမှာ နေတုန်းကပေါ့ အ.ထ.က (၄) မှာတက်ခဲ့ရတယ်. မနက်ခင်းဆိုရင် အတန်းပိုင်ဆရာမက Roll Call ခေါ်ရော… ရခိုင်သံဝဲ၀ဲလေးနဲ့ပေါ့…
ကျွန်တော်က ရှေ့ဆုံးတန်းကဆိုတော့ အရင်ဆုံး နာမည်ခေါ်ခံရတာပေါ့. ယောင်္ကျားလေးတွေ ခေါ်ပြီးတော့ ကောင်မလေးတွေဖက်ကို ဆက်ခေါ်ရော. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျာ. ကောင်မလေးတစ်ယောက်နာမည်ကလေ ခင်သီတာထွန်းတဲ့….
သူ့နာမည်လေးလည်း ခေါ်သံကြားရော ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ဆတ်ခနဲလှည့်ကြည့်ရင်း သူရှိလောက်တဲ့ ထောင့်တစ်နေရာလေးကို အာနိုးကားထဲကလို မျက်လုံးကို တစ်တစ်တစ်တစ်နဲ့ Focus လုပ်ပစ်လိုက်ခဲ့တယ်.
Wow! Damn pretty! (အဲဒီ့တုန်းကတော့ ဒီလိုဘယ်ပြောမလဲနော်. ဟတ်ဟတ်)
မိုက်တယ်ကွာ. ချစ်စရာလေး… သူကလည်း ကျွန်တော့်ကို မထီတရီလေးနဲ့ ပြန်ကြည့်တယ်. ဒီဗမာကောင်လေးတော့ ငါ့ကို စိတ်ဝင်စားသွားပြီပေါ့လေ. ကျန်တာတွေတော့ ဆက်မပြောတော့ပါဘူးဗျာ.
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ငါးတန်းပါခင်ဗျာ…
အဲဒီ့တုန်းက အစ်ကိုက ၈ တန်းပါ. သူ့အခန်းကို သွားလည်တော့ သူတို့အခန်းထဲက အလှဆုံးအစ်မကြီး (အခုတော့ ဆရာဝန်ဖြစ်လို့ ကလေးတောင်ရနေပြီဆိုပဲ. ပြောပြတာပါ. Update update!) နဲ့ ကျွန်တော့်အစ်ကိုနဲ့က ဘာလိုလိုပေါ့ဗျာ. အဲဒီ့အစ်မကြီးက ကျွန်တော်လာလည်ရင် ကျွန်တော့်ကို ခေါင်းပုတ်ခြေပုတ်နဲ့ အရှက်ပြေစတတ်တယ်. အချဉ်ထုတ်တွေလည်း ကျွေးတယ်ဗျ. ကျွန်တော့်အစ်ကိုတော့မသိဘူး. ကျွန်တော်တော့ အချဉ်ထုတ်စားပြီး အဲဒီ့အစ်မကြီးကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်လို့ အစ်ကိုက နောက်တော့ပြန်ပြောပြပါတယ်…
ဟုတ်. အဲဒီ့တုန်းက ငါးတန်းပါပဲ…
ဒီလိုနဲ့ ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ပေါ့ဗျာ. ရင်ခုန်လိုက် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်လေးဖြစ်သွားလိုက်နဲ့ပေါ့ ၈ တန်းနှစ်ကို ရောက်လာခဲ့ပါလေရော….
၈ တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော် မိတ္ထီလာမှာပေါ့. အဖေဆုံးပြီးတာ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်လေ. အချစ်ဆိုတာ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူး.. (တကယ်တော့ မ၀င်စားချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တာပါဗျာ. ဟတ်ဟတ်) ကျောင်းသွား၊ အိမ်ပြန်၊ စွန်လွှတ်၊ စက်ဘီးနဲ့မြို့ထဲလျှောက်ပတ်စီး၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကန်ဘောင်ထိပ်မှာ ဘူးသီးကြော်စား၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၊ ဗိုက်အစာကျွေး၊ မျက်စိအစာကျွေးနဲ့ ၈ တန်းနှစ်မှာ မှတ်မှတ်ရရ ရည်းစားမရခဲ့ဘူး. ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားခဲ့တာတော့ ရှိတာပေါ့. ၇ တန်းအခန်းထဲက ဆံပင်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ညီမလေးကိုလေ…
သူနဲ့ဖြစ်ပုံကလည်း အဆန်းသားလား. တစ်ရက်မှာ ဆရာမက အခန်းထဲမှာ သင်္ချာပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်မေးပါတယ်. Trapezian ရဲ့ Formula ကိုသိမှ တွက်လို့ ရမှာပါ. ကျွန်တော်လည်း မသိတော့ဘူး မေ့ကုန်ပြီ. ဘယ်သူမှလည်း မသိကြတော့ဘူး. အဲဒီ့မှာ ဆရာမက ပွဲကြမ်းပါလေရောဗျာ.
မင်းတို့တွေမရှက်ဘူးလား ဘာလားညာလားပေါ့. ကျွန်တော်ကလည်း အတန်းထဲမှာ အတော်ဆုံးဆိုပြီး အားလုံးက ထင်ထားကြတာ တကယ်တော့ မြွေဖမ်းနေခဲ့တယ်လေ. မြွေခြောက်ကိုက်တယ်ဆိုတာ အဲဒါပေါ့ဗျာ. ဒါနဲ့ပဲ ဆရာမက ဆက်ပြောပါတယ်.
သွား. ရန်အောင်. ခုနစ်တန်းအခန်းထဲက မင်းကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကို သွားခေါ်ခဲ့. သူ့ကိုတွက်ပြခိုင်းမယ်. သူတွက်လို့ရရင် မင်းတို့တွေကို နားရွက်ဆွဲခိုင်းမယ်..
ကျွန်တော်လည်း အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ခုနစ်တန်းအခန်းကို လာခဲ့ရပါတယ်. အတန်းထဲမှာ ဆရာမစာသင်နေတော့ ခွင့်တောင်းရပါတယ်. ပြီးတော့ အားလုံးကြားအောင် အသံမြှင့်ပြီး
‘ဆရာမ ဒေါ်တင်တင်ဝင်းက ဒီအခန်းထဲမှာ သင်္ချာအတော်ဆုံးကျောင်းသားကျောင်းသူ တစ်ယောက်ယောက်ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်. အဲဒါတစ်ယောက်ယောက် လိုက်ခဲ့ပေးပါ´ ပေါ့…
လူဆိုတာကလည်း တော်တယ်တတ်တယ်ဆိုရင်တောင် ရှေ့ထွက်ရဲတဲ့ သတ္တိလူတိုင်းမှာ မရှိဘူးဗျ.
ဘယ်သူမှထွက်မလာကြဘူးဗျာ. ကျွန်တော်လည်း လူပျိုပေါက်စ ရှက်တာပေါ့ဗျာ. မျက်နှာဆိုတာ စတော်ဗယ်ရီသီးမီးဖိုပေါ်တင်ပြီး အပေါ်က Diamond ဆေးအနီရောင်လောင်းချထားသလိုပဲ. အဲဒီ့မှာပဲ မထင်မှတ်တာတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်.
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ထိုင်ခုံကထတယ်. သူ့ဆံပင်လေးကို သပ်တင်ပြီး ဆရာမကို လက်ညှိုးလေး နှုတ်ခမ်းမှာကပ်လို့ ခွင့်တောင်းတယ်. ပြီးတော့ နောက်ကိုချာခနဲလှည့်ပြီး ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်တယ်. မျက်လုံးချင်းစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်. သူလိုက်ခဲ့မယ်ပေါ့.
ထက်မြက်တဲ့ဟန်ပန်၊ စူးရှတဲ့မျက်လုံး၊ ပြုံးမယောင်မျက်နှာပေးနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီကို တန်းတန်းမတ်မတ်လျှောက်လာခဲ့တယ်.
ကျွန်တော်လည်း အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ပေါ့. အခုလိုမျိုးလည်း အတွေ့အကြုံက မရင့်ကျက်ခဲ့သေးဘူးလေ. (ဟဲဟဲ. ကြုံတုန်းလေးကြွားတာပါ.)
အဲဒီ့တုန်းက ဘယ်လိုဘယ်လို ၈ တန်းဆောင်ဖက် ပြန်ရောက်ခဲ့သလဲမသိတော့ဘူး. ကံဆိုးလွန်းစွာနဲ့ပဲ အဲဒီ့ကောင်မလေးက ကျွန်တော်တို့ တွက်မရတဲ့ Blackboard ပေါ်က ပုစ္ဆာကို ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်နဲ့ တွက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်.
ရှက်လိုက်တာဗျာ…. ခေါင်းကိုမဖော်ရဲဘူး. တစ်တန်းလုံးငြိမ်နေတာပဲ. ပိုရှက်စရာကောင်းတာက အဲဒီ့ကောင်မလေးကို ကျွန်တော့်နားရွက်ဆွဲခိုင်းတယ်…
ကောင်မလေးကလည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလေးနဲ့ ရယ်ပြီး ကျွန်တော့်နားရွက်ကို မရဲတရဲလေးအကိုင်...
ဓာတ်ပုံရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး… မျက်စိထဲမှာ ကြယ်တွေလတွေမြင်သွားတာကို ပုံပေါ်အောင်ပြောပြတာပါ..
ကျွန်တော်တစ်ယောက် ၈ တန်းဆောင်ဖက်ကနေ ၇ တန်းဆောင်ဖက်ကို ငေးကြည့်လိုကြည့်၊ မုန့်စားဆင်းချိန်မှာ ယောင်တောင်တောင်နဲ့ သူလေးနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံမိအောင် ကြိုးစားနဲ့ပေါ့…
အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့သလို ဘာလုပ်ရမှန်းလည်း မသိခဲ့တဲ့ အူကြောင်ကြောင် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့…
သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်ရင်ခုန်ခဲ့မိတယ်…. ချစ်မချစ်တော့မသိခဲ့ဘူး…
ပိုသေချာတာကတော့ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ် ရင်တွေခုန်တတ်လာခဲ့တယ်ဗျာ….
၈ တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော် ကျူရှင်စတက်ခဲ့တာပေါ့. အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကနေ ကျူရှင်ကို လမ်းလျှောက်သွားရတယ်. စက်ဘီးမ၀ယ်နိုင်ခဲ့သေးဘူးဗျာ. တကယ်ပြောတာပါ. ကျွန်တော့်အစ်မက ၀န်ထမ်းလစာလေးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့အမေကို ကျွေးထားတာ. လောက်ငှရုံလေးပါ. ထားလိုက်ပါလေ. ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီး ကျူရှင်တက်တယ်. အဲဒီ့မှာ သူငယ်ချင်းမလေး နှစ်ယောက်နဲ့ အတူတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ
သူတို့ကရှေ့ကလမ်းလျှောက်၊ ကျွန်တော်က နောက်ခပ်ခွာခွာလေးကလိုက်ပေါ့ဗျာ. သိပ်မကပ်ရဲခဲ့ဘူး. ကျွန်တော်အရမ်းရှက်တတ်လို့ပါ. မိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့ရင် အိုးတို့အန်းတန်း သိပ်ဖြစ်တယ်ဗျ. တကယ်ပါ. အဲဒါကို ဘယ်လိုရအောင် ဖျောက်ခဲ့လဲ ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြသွားပါမယ်. Adventures တွေပါပဲဗျာ.
အဲဒီ့သူငယ်ချင်းမလေးနာမည်ကို ဖြိုးလို့ပဲ နာမည်ပေးလိုက်ရအောင်နော်.
သူက သွားတက်လေးနဲ့ ချစ်စရာလေး. စာလည်းအရမ်းတော်တယ်. စာပြိုင်ဖက်တွေပေါ့ဗျာ. ကျူရှင်ရောက်ရင် ဆရာမကလည်း အပြိုင်စာမေးတာပဲ. သူ့ကြောင့် ကျွန်တော်စာပိုကျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သူနဲ့ စကားကောင်းကောင်းမပြောခဲ့ဖူးဘူး. တစ်ခါတစ်လေ သူ့အမှတ်တွေသိပ်ကောင်းနေရင် ပိုဆိုးတယ်. သူ့နောက်ကနေလိုက်ရင်း သူ့အရိပ်ကို ကျွန်တော်လိုက်နင်းနေခဲ့မိတယ်. ငါနင့်ထက်သာရမယ် ဆိုပြီးတော့လည်း စိတ်ထဲက အကြိမ်ကြိမ် ကြုံးဝါးခဲ့ဖူးလေရဲ့….
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သူ့ကို သံယောဇဉ်တော့ အရှိသား….
ကျူရှင်မှာ ဆရာမရဲ့ တူမနဲ့ ကျွန်တော်တို့က တစ်တန်းတည်းလေ… သူလေးကလည်း ကျွန်တော့်ကို favor ပေးတယ်ဗျ. ဟတ်ဟတ်. ခက်တာက ကျွန်တော်ကလေ အမဲလိုက်နည်းမသိခဲ့တဲ့ ကျားတစ်ကောင်လိုပဲ မာန်သာဖီနေခဲ့တယ်. သားကောင်တစ်ကောင်မှ မရခဲ့ဖူးဘူး. ဒီကြားထဲ ရှက်တတ်တော့ ပိုဆိုးတယ်ဗျာ
သူလေးနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံ၊ စိုက်ကြည့်၊ ပြီးတော့ ကိုယ်ကပဲ မျက်နှာစလွှဲခဲ့တာ. ဘာမှလည်း ဖြစ်မြောက်အောင်မချဉ်းကပ်ခဲ့ဘူး. ချဉ်းကပ်နည်းတွေလည်း မတတ်ကျွမ်းခဲ့ဘူး.
တကယ်တော့ ၈ တန်းနှစ်က အူလည်လည်နဲ့ ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်. တစ်ခုတော့သိလိုက်တယ်. မရယ်ပါနဲ့နော်. ရယ်ချင်လည်းရယ်ပါဗျာ. ရယ်ပါ.
ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ချို့ ရှိနေပါလားဆိုပြီး ကျွန်တော် လူပျိုစိတ်စပေါက်လာခဲ့တယ်…
အဲဒီ့တုန်းက ကျွန်တော်သွားလေ့ရှိတာကတော့ မိတ္ထီလာဈေးကြီးနားက စာအုပ်ဆိုင်တွေပါပဲ. အဲဒီ့ကနေ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပိုက်ဆံစုပြီး ၀ယ်ခဲ့တယ်.
ပီမိုးနင်းရဲ့ လူပျိုဂုဏ်ရည်ဆိုလားပဲ… (နာမည်မှားရင်ခွင့်လွှတ်ဗျာ. အဲဒီ့နာမည်ဆင်ဆင်လေးပဲ. မှန်ချင်လည်းမှန်နိုင်တယ်.)
အဲဒါကိုဖတ်ပြီး ချစ်နည်းများကို စသင်ယူခဲ့ပါတော့တယ်. သူငယ်ချင်းများ၊ နောင်တော်ကြီးများကိုလည်း မေးစမ်းနဲ့ပေါ့ဗျာ.
၉ တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော် အ.လ.က ကျောင်းကနေ အ.ထ.က ကျောင်းကို စပြောင်းခဲ့ရပါတယ်. အဲဒီ့ကျောင်းမှာ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရ မော်ကွန်းတွေကို စတင်ရေးထိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ. နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းတွေမှာ ကျွန်တော်နဲ့ စာပြိုင်ဖက်တွေအကြောင်း ထည့်ရေးထားတယ်. အဲဒါကို ကိုယ်ရည်သွေးတယ်လို့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ မြင်မိကောင်းမြင်မိပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ Autobiography အနေနဲ့ စစ်မှန်စွာ ရေးသားချင်လို့ ခွင့်ပြုပါ. နာမည်တွေကိုတော့ ပြောင်းရေးသွားပါမယ်…
တကယ်ဆို ကျွန်တော်က လူမှုဆက်ဆံရေး အင်မတန်မှ ညံ့ဖျင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါလို့ ပြောရင် ခင်ဗျားတို့အားလုံး ယုံကြမှာ မဟုတ်ဘူး….
စာပဲ… ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ စာကလွဲရင် ဘာကိုမှ ထည့်မထားခဲ့ဘူး. ကျွန်တော့်ဘ၀နိမ့်ကျနေတာကို ပညာနဲ့ပြန်မြှင့်မယ်ဆိုတဲ့ ဘ၀င်နိမ့်စိတ်ကိန်းအောင်းနေခဲ့တယ်. Sense of inferiority ပေါ့ဗျာ. ဒါကြောင့်လည်း လူတွေနဲ့ ကင်းကွာခဲ့တယ်ဗျာ. အဖေမရှိတော့တဲ့ မိသားစုမှာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်လည်း တော်တော်ကျဉ်းမြောင်းသွားခဲ့တယ်လေ. ၀န်ထမ်းမိသားစုဆိုတော့ ဒီအိမ်ဒီမိသားစုအချင်းချင်းပဲ ဆက်ဆံဖြစ်ခဲ့တယ်.
ဒီနေ့ ရန်အောင် ဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာကိုတော့ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးအသိပါပဲ. ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်. ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်စားခဲ့ရပါတယ်…
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အချစ်ငတ်ခဲ့ရတယ်. ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီး ပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်. တစ်ခုတော့ ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်. ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှ မဖျက်ဆီးခဲ့ဖူးဘူး… အဲဒါယောင်္ကျားစကားပဲ…
ဇာတ်ရှိန်မြင့်လာပြီဆိုလည်း ဆက်ရေးဆက်ရေး ဒါပေမယ့် သတ်သတ်လွတ်တော့ ဆက်စားဦးနော် ကိုရန်အောင်
ကိုရန်လေးတို့များ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဇကွဲလေးနဲ့ပါလား။ ဟင်းဟင်းဟင်း ... :P
နောက်တာပါ ... ဖတ်လို့ကောင်းတယ် .. တကယ်ပြောတာ ... ဆက်ရေးနော် ... ။
ဟိုက်.. ၅တန်းတည်းကတဲ့ ။ လေးစားပါတယ် မောင်ရန်ရယ်း)
အရေးထဲ ကြော်ငြာက၀င်သေးတယ် ...
အင်း... ကရုဏာရှင်လေးတွေတော့ ပေါ်လာဦးတော့မှာပဲ။
အလဲ့ မမတွေက ၈၅ % ဆိုပပါကလား .. ကျိတ်လိုက်ဟ
မျက်စိဒုက္ခခံပြီး လာဖတ်ပေးပါ့မယ်၊ ဟဲ
ပြီးတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လဲဟေ့...
အမကို တက်ထားတယ် ဆိုတော့ ဒီလိုအကြောင်းများလားလို့...
သူများတို့က ဒါမျိုးရေးပြီး ကြွားချင်တာကို ကိုယ်ချင်းမစာ......
အမ ခင်မင်းဇော်ပြောတာ ရီလိုက်ရတာ။ ဟုတ်တယ်ကိုရန် မပန်နဲ့ အမခင်မင်းဇော်က ဒါမျိုး တဂ်လုပ်ခံချင်တယ်တဲ့။